Ogaden News Agency (ONA) – Sheekh Muraaro Dilaac Ugu geeriyaday Degmada Sheygoosh
Sheekh Muraaro Dilaac Ugu geeriyaday Degmada Sheygoosh
Wararka naga soogaadhaya dagmada Shaygoosh ee Gobolka Qoraxay ayaa sheegaya in uu muwaadin kamid ah culimada ogadenia ugu geeriyooday muraaro dilaac ama qaracan.
Sheekh Maxamad Axmad Yaasiin wuxuu ahaa nin culimo ah oo kamid ah culimada deegaankaas aad looga yaqaano waxaana kudhacday masiibooyin is xig xigay oo ah geeri kutimid qaar kamid ah qaraabadiisa sheekha oo jooga qabriga wiil uu Abti u ahaa oo kugeeriyooday dagmada Shaygoosh
ayaa loosoosheegay Xaaskiisii oo kugeeriyootay isbitaal kuyaala magaalada Jigjiga wuxuuna go’aansaday in uu si dag dag ah u baxo si uu uga gaadho xabaasha xaaskiisa cibaado oo uusan ku ogayn cid sidaas ah
oo lajoogtay wuxuuna sookiraystay baabuur si uu ubaxo.
Diyaar garowgii sheekha kadib waxaa socdaalkiisii is-hortaagay ciidanka gumaysiga oo aan ogolayn in uu baxo baabuur caadi ah waxayna sheekha ku wargaliyeen in uu raaco baabuurka baska ah ee bari
bixidoona inta kahoraysana uusan magaalada dhinac uga bixi karin.
Daqiiqado kadibna waxaa la arkay sheekhii oo dhulka kudhacay oo leh “Alla cadawsanaa ma cibaadaana maydkeeda arkaynin” isla wakhtigiina wuu nafbaxay waxaana qabrigiisa laga jeexay meeshii wiilkii uu abtiga u ahaa laga qoday.
Dadka goobjooga ahaa ayaa sheegay in Sheekha uu ku samray Dhimashada Xaaskiisa iyo Ehelkiisa balse daggaalkii dhexmaray Ciidanka Gumeysiga oo awood u sheegtay midaasi sabab looga dhigay in sheekhu aad u xanaaqo kadibna dhiigiisa kor u kacay ama wadnihiisu si xawli ah u garaacay cadhadii uu ka qaaday ficilka gumeysiga Ethiopia. Waxaa xusid mudan in Gobolku laheyn goob caafimaad oo wax loogu qaban karo.
Dhacdadan muraaro dilaaca ah oo dhacday 28/7/15 ayaa dadwaynihii kunoqotay argagax waxayna magaalada Shaygoosh u ahayd maalin iyo maalmo murugo.